Etu esi ewepu ibe maka ochicho ime obodo Martech Zone
Na usoro na-aga n'ihu na ịmepụta saịtị gị maka azụmaahịa inbound, anyị chọrọ iwepu otu esi achọta peeji ịchọrọ mpaghara ma ọ bụ ọdịdị ala. Nchọgharị ọchụchọ dị ka Google na Bing na-arụ nnukwu ọrụ nke iburu peeji nke metụtara ihu ala, mana enwere ụfọdụ ihe ị nwere ike ime iji hụ na edepụtara ibe gị nke ọma maka mpaghara ziri ezi na isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu ndị metụtara ya.
Nchọta mpaghara bụ HUGE… na oke pasent nke ọchụchọ niile a na-abanye na isiokwu metụtara ya maka ebe onye ahụ na-achọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụ uche ohere ahụ njikarịcha ọchụchọ mpaghara na-enye n'ihi na ha chere na ụlọ ọrụ ha abụghị localỌ bụ mba ma ọ bụ mba. N'ezie, nsogbu bụ na ọ bụ ezie na ha anaghị ahụ onwe ha dị ka ndị obodo, ndị na-achọ ịzụ ahịa na-achọgharị na mpaghara.
Peeji Mbụ - Ka ọ dị ugbu a, ihe kachasị mkpa na peeji gị bụ aha aha. Mụta otú ebuli mkpado aha gi na ị ga-abawanye ogo na pịa-site ọnụego gị blog posts na search engine N'ihi peeji nke (SERPs) budata. Gụnye isiokwu na ọnọdụ ya mana debe ya n'okpuru mkpụrụedemede 70. Hụ na ị gụnyere nkọwapụta meta siri ike maka ibe - n'okpuru mkpụrụedemede 156.
URL - Inwe obodo, steeti ma ọ bụ mpaghara na URL gị na-enye njin ọchụchọ na ọnọdụ doro anya nke ibe ahụ dị. Ọ bụkwa nnukwu njirimara maka onye ọrụ nchọta ihe nchọta yana ha na-enyocha ntinye akwụkwọ nchọta ihe ọzọ.
aga - Gị Kachasị aha kwesiri inye isiokwu juputara na isiokwu ya na mpaghara mpaghara ala ị na-anwa iji bulie ya na nke mbụ, wee soro ozi ala gị. Gbalia itinye ngosiputa meta siri ike maka akwukwo - n’okpuru ihe odide 156.
Ọrụ SEO mpaghara | Indianapolis, Indiana
Ịkekọrịta Ahịa - Ime ka onye ọbịa gị bia ịkekọrịta peeji gị bụ ụzọ dị ukwuu iji mee ka ọ kwalite n’ime obodo ndị dị mkpa.
map - Ọ bụ ezie na esighi ike na eserese (ọ nwere ike ịbụ ya KML), Inwe maapụ na peeji gị bụ ụzọ dị mma iji nye ndị ọrụ gị mmekọrịta mmekọrịta ka ị chọta gị.
ntụziaka bu ihe agbakwunyere agbakwunyere ma enwere ike itinye ya na Google Maps API. Gbaa mbọ hụ na edepụtara azụmahịa gị na akwụkwọ ndekọ aha azụmaahịa nke Google+ na Bing nwere ọnọdụ ihu igwe dabara adaba na profaịlụ azụmahịa gị.
Address - Gbalia itinye adreesị izipu ozi gị na ọdịnaya nke ibe ahụ.
Images - Adgbakwunye onyonyo nwere akara ngosi mpaghara ka ndị mmadụ wee mata ọnọdụ ya dị egwu, na ịtinye mkpado alt nke nwere ọnọdụ ahụ bụ isi. Ihe onyonyo na-adọta ndị mmadụ ma na-adọta nchọta onyonyo… mkpado alt na-agbakwunye na ojiji nke okwu ala.
Ozi ala - akara ala, aha ụlọ, okporo ụzọ, ụka, ụlọ akwụkwọ, agbata obi, ụlọ nri dị nso - okwu ndị a niile bụ okwu bara ụba ị nwere ike itinye na ahụ nke ibe ahụ ka edere aha gị wee chọta ebe peeji gị dị Kachasị maka. Ahapụla naanị otu isiokwu mpaghara. Ọtụtụ mmadụ na-eji nyocha mpaghara dị iche iche achọ.
mobile - Ọtụtụ oge ndị ọbịa na-anwa ịchọta gị, ha na-anwa ime ya na ngwaọrụ mpaghara. Jide n'aka na ị nwere ọrụ mkpanaka na-arụ ọrụ nke ibe ọchụchọ mpaghara ka ndị ọbịa wee nwee ike ịchọta gị ma ọ bụ nweta ụzọ ị ga-esi.
Esi ebuli gị Ibe akwukwo
Tags: azụmahịa azụmahịa binggeonjikarịcha alanwe alaebe googlenjikarịcha mpagharanchọta mpagharaobodo seoebenkewamap
Mac Nkwado Center
Ọkt 18, 2012 na 1:26 AM
Atụmatụ dị egwu!
Ozi gị ga-enyere anyị aka ka anyị na-elekwasị anya ndị ahịa mpaghara si Melbourne nke Australia. Ugbu a enwere m ike inweta echiche nke ịchebe weebụsaịtị m gaa na ndị na-ege ntị na mpaghara.
Ọkt 18, 2012 na 6:10 PM
Yabụ ị na-akọwapụta ekebe ọdịda maka weebụsaịtị gị, ewepụ ya na peeji nke mbụ, nke kachasị maka nyocha mpaghara? Ana m eche na ọ gaghị abụ ihe amamihe dị na ya ịmepụta ọtụtụ peeji ọdịda ndị a maka obodo ndị gbara ya gburugburu (Ana m eme ịre ahịa ịntanetị maka ụlọ ọrụ ụlọ na-arụ ọrụ maka obodo 5 gbara ya gburugburu)?
Daalụ! Nnukwu ọdịnaya.
Ọkt 20, 2012 na 2:09 PM
Daalụ @disqus_hIZRrUgZgM: disqus. Nwere ike ịgafe na peeji nke kachasị ọdịda mpaghara. Amaghị m na m ga-enwe otu maka ebe ọ bụla m na-achọ ịdọta, mana m ga-enwe mpaghara ndị dị mkpa. Yabụ, dịka ụlọ ọrụ ịnshọransị mba, enwere m ike ịnwe peeji nke ọ bụla nnukwu obodo mepere emepe… mana ọ bụghị obodo niile. Ikwesiri inwe ọdịnaya zuru ezu na nke ọ bụla iji gosi ọdịiche dị na nke na-esote. N'ihe atụ gị, enwere m ike ịnwe peeji 5 dị iche iche - otu kachasị maka obodo ọ bụla.